Global Voices teny Malagasy » Roandà: Miaina Toy ny Mpanjaka Ireo Mpiasa Amin’ny Fikambanana Mpanao Asa Soa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Aogositra 2018 13:08 GMT 1	 · Mpanoratra Jennifer Brea Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Rwanda, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Voina
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2007)
Matetika voakiana ireo vahiny miasa amin'ireo fikambanana mpanao asa soa ao Afrika noho izy ireo miaina tsy mifangaro amin'ny vahoaka eo an-toerana izay heverina fa tokony ho ampian-dry zareo. Fomba ahoana moa no hampahomby ireny olona mandany ny fotoanany any anaty fiara 4×4 ireny, mampiasa fitaovana fandrindràna rivotra iainana, fitaratra matroka akarina mba tsy hidiran'ny vovoka sy hisakanana ny tabataba ety ivelany tsy ho re? Fanontaniana miverimberina izany.
Soratan ‘ny bilaogy “Les aventures du Civiliste Guillaume” ny momba ireo legionanà fikambanana mpanao asa soa mipetraka ao Roandà, ary hitany fa azo kianina no sady azo arovana ireo tonga hitondra fanampiana ireo.
Firenen'ireo ONG sy ny toa azy i Roandà : WFP  (World Food Program), UNDP  (United Nations Developement Program), ONUSIDA  (hainao na tsy ho hazavaina aza), Right to Play , Human Rights Watch , USAID  (United States Agency for International Development), CARE,  PRI  (Penal Reform International) … ndeha ho ampiantsika an'ireo fandaharanasa mpitondra fanampiana ho an'ny fampandrosoana anà firenena maromaro, ireo fikambanana avy ao Roandà ihany, sns, sns, sns… Raha mila lisitra (tsy feno tanteraka), potsiro eto .
Raha ONG, misy maro sy amin'ny endrika samihafa izy ireny. Ny goavana, ny kely, ny iraisampirenena, ny avy eo an-toerana, ny afrikàna, ny eoropeàna, ny avy any Etazonia, tsy isalasalàna fa misy vitsivitsy an'ny shinoa, ireo ONG ahitàna Roandey bebe kokoa, ny sasany ahitàna eoropeàna bebe kokoa (na dia notakian'ny governemanta aza ny hisian'ny fitovian'isa).
Zarain'ny “Civiliste Guillaume” ireo fomba fijerin'ny roa amin'ireo frantsay namany  :
Ao Roandà, manana isika namana vitsivitsy miasa amin'ireo ONG na ao amin'ny Firenena Mikambana. Azo lazaina ho miaina toy ny mpanjaka ry zareo, mihataka amin'ny vahoaka, ny antoandro dia matetika ry zareo no any anaty birao… Fa ahoana no ahafahany manantena hahatakatra ny zavamisy iainan'ny olona tian-dry zareo ho ampiana raha toy izany no fomba fiainany ?!? Tsy ho tanteraka fotsiny izao izany. Rehefa miresaka amin-dry zalahy dia hitanay tsara ny fahasahiranan-dry lerony manakatra ireo olona heverina fa tokony ho ampiany. Tsy hoe noho ny haratsian-toetra, fa satria tsy ao anaty faritra ahafahany manao izany ry zareo. Tsy milaza aho hoe isika, afaka mahatakatra ny zavatra rehetra, tsy izany velively, fa azo antoka hoe raha miaina isanandro miaraka amin'ny ankizy ianao, izay jerena ho toy ny tsy misy dikany na kely aza, dia hahatsapa isika, fa tsy hoe tsy hahatakatra, zavatra vitsivitsy momba ny ‘olan-dry zareo’, sy ny nofinofin-dry zareo, ny tetikasany sy ny faniriany’ momba ny hoaviny.
Nozarain'ny “Civiliste Guillaume” ny hevitr'ireo namany nony tonga tao Roandà izy, saingy efa niova ny heviny hatreto :
Any Soisa, resaka toy izany ihany no henoko. Ny fahatsapàna hoe ny sasany amin'ireny olona ireny no tsy misy fifandraisana amin'ny hafa. Mora ny fiainany, manjoria kely ary mandray karama tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy.
Rehefa tonga teto Roandà, mbola toy izay ihany ny karazana fahatsapako. Ny zavatra hita voalohany dia ireo fiara raitra vaventy, ireo trano tsara tarehy, ny birao. Ireo olona toa miaina anaty tontolo iray hafa mihitsy.
Dia avy eo aho nihaona tamin’ “ireny olona ireny”. Ireo miasa ao amin'ny Firenena Mikambana, ireo izay mandany ny androny bebe kokoa any anaty birao fa tsy eny an-kianja. Nanomboka nahafantatra azy ireo aho. Nahita ny asany. Nandany ny harivako niaraka tamin'izy ireo. Volana vitsivitsy taty aoriana, niova ny fihevitro an-dry lerony.
Eny, manana andianà Toyota Prado ny Firenena Mikambana, saingy tsy betsaka toy ny any an-kafa. Manana toy ireo koa ny EPR. Eny, miasa any anaty birao ny sasany ary zara raha mifangaro amin'ny vahoaka izay tena mila fanampiana. Saingy mety ho zavadehibe ihany koa ny asa iray anaty birao. Tsy eny an-kianja fotsiny no hanomanana ny famatsiana tobinà mpitsoaponenana. Ary indrindra, tsy nisy na iray aza tamin'ireo nifanenana tamiko no mijanona ao anatin'ny tontolo azy manokana. Samy manana namana Roandey daholo ireo vahiny mpiasa mila ravinahitra eto nifampiresaka tamiko. Ny sasany manana maromaro kokoa noho ny hafa.
Ary indrindra, samy tohina amin'ny zavatra mitranga manodidina azy daholo. Samy miezaka ny manao zavatra kely daholo ny rehetra mba hananganana tontolo iray tsara kokoa.
Lavitra ahy ny hilaza fa hoe idealy ny zavamisy. Mazava loatra, misy ireo “matavy” mandray karama tsy mifanentana mihitsy (fa etsy ankilan'izay, firy ireo mpianatra asa omena karama varimasaka). Mazava loatra fa misy tsy fetezan-javatra goavana hita ao anatin'ireo ONG goavana. Mazava loatra fa miteraka vesatra sy fahasarotana ara-pitantanana ny haben'ilay fikambanana. Fa ao ambadik'izany rehetra izany, aoka tsy ho adinontsika fa misy koa ireo olona. Ary mendrika ho tolorana haja ireo na dia kely monja aza.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/30/125445/
 Right to Play: http://www.righttoplay.com/
 roa amin'ireo frantsay namany: http://tuzareba.over-blog.com/article-2762488.html
 Jennifer Brea: https://www.globalvoicesonline.org/author/jennifer/